फेरिएको पलाँता – Rajdhani Daily
कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका स्थानीय सरकारको आगमनपछि रूप फेर्दै छ । गाउँपालिकाले पहिलो वर्षमै नागरिकको मन जित्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको छ । जसले गाउँपालिकाका प्रत्येक परिवारको मुहार फेरिने निश्चित छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनेदेखि घरघरमा सडक, खानेपानी, निःशुल्क शिक्षा र प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गर्ने नीति आएपछि नागरिकको मुहार उज्यालो देखिन थालेको छ ।
गरिब घरपरिवारलाई रासन कार्डमार्फत निःशुल्क रासनदेखि युवा कार्यदल निर्माण गरेर एक सय जनालाई रोजगारी दिएपछि नमुना काम गरेको बताइन्छ ।
युवा कार्यदलले जनयुद्धको बेला मारिएका परेग शाही मुनालको नामबाट मुनाल मार्ग निर्माण कार्य सुरु भएपछि पलाँता–९ सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । वडापालिकासम्म मोटरबाटो खन्दै डोजर पुगेपछि स्थानीयले अबिर जात्रासमेत गरेका थिए । मुनाल मार्गको दुई किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिसकिएको छ । यस मार्गमा ५० जना कार्यदलका सदस्यले निरन्तर काम गरिरहेका छन् ।
कर्णाली करिडोर निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले पलाँता गाउँपालिका–९ मा पर्ने घाटाचौरसम्म गाडी गुडाएपछि यहाँको भविष्य नै फेरियो । दुई दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम मान्मा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको वडा नं ७ का दीपकबहादुर बमले बताए । उनले भने, ‘आज म हर्षित छु, कल्पना पनि थिएन, यति छिटो पलाँतामा गाडी आउँछ भन्ने ।’
बिरामी हुँदा डोको चढेर हिँडेको बाटोमा एम्बुलेन्स चढ्ने धोको पूरा भएको उनले बताए । स्थानीय पानसरा भण्डारीले भनिन्, ‘बिरामी भएका बेला सुर्खेत जानका लागि दुई दिनसम्म डोकोमा बस्नुपथ्र्यो, हामी दुई घण्टामा जिते मान्मा पुग्छौं, दोस्रो दिनमा सुर्खेत पुग्छांै ।’ आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वडामा मोटरबाटो पु¥याउने तयारीका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बमको दाबी छ । सडक विकासको पहिलो खुड्किला भएकाले गाउँपालिकाले सडक निर्माण थालेको वडा नं. ९ का अध्यक्ष टक्कबहादुर बमले बताए । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा डोजर पनि खरिद गरेको छ । नयाँ डोजर गाउँमा पुगेपछि स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले अबिर जात्रासमेत गरे ।
सडक निर्माण भएपछि सदरमुकामदेखि तीन दिन पिठ्युँमा भारी भोकेर पेट भर्ने समस्याको अन्त्य भएको साबिकको धौलागोह निवासी सुमन बमले बताए । सडक निर्माणमा यस वर्ष मात्र गाउँपालिकाले ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर क्षत्रीका अनुसार युवा कार्यदल निर्माणपछि संघीय सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रलायले बनाउन लगाएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रत्येक वर्ष कार्यदलको संख्या थप्दै जाने र पाँच वर्षमा ५ सय पु¥याउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको उनले बताए ।
गाउँपालिकाले वडा नं. ६ को ओदी, जाँफे, छलाहाँ सडकखण्ड, वडा नं. ९ को अशोक र मुनाल मार्गको निर्माण जारी राखेको छ । आँदी चन्द चौपाने अशोक र परेगबहादुर शाही मुनाल युद्ध कालमा सरकारी फौजबाट मारिएका स्थानीय हुन् ।
पलाँता गाउँपालिकाको वडा नं ९ को सिमानामा कर्णाली कोरिडोरले पनि छोएको छ । कर्णाली कोरिडोरले छोएसँगै डोजर पुगाउन र गाउँपालिका क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न सजिलो भएको हो । कर्णाली कोरिडोरको निर्माण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।
उच्च शिक्षा निःशुल्क
यहाँ उच्च शिक्षा पनि निःशुल्क छ । पहिलो गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेअनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका सबै विद्यालयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क गरेको जनाएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा ११ र १२ कक्षामा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट विद्यालयले एक रुपैयाँ पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनसमेत गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहँुचको हक हुने भनिएको छ ।
गाउँपालिकाले विपन्न परिवारलाई निःशुल्क खाद्य प्रदान गरिरहेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका सबैभन्दा निम्न आयस्रोत भएका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई रासन कार्ड वितरण गरेर खाद्यान्न वितरण गर्न सुरु भएको हो । गाउँपालिकाले १ फागुन २०७४ अनुदानमा खाद्य सामग्री वितरण गर्न सुरु गरेको हो । गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, अशक्त, असहाय र परनिर्भर परिवारलाई रासन कार्ड वितरण गरिरहेको छ ।
पहिलो वर्ष प्रत्येक वडाका ६ देखि १० जनालाई यो सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । गाउँपालिकाका ९ वडाबाट १० जनाका दरले ९० जनाले सो सेवा पाउनेछन् ।
वडावडामा जनसेवा स्वास्थ्य एकाइ
नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले सबै वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । गाउँपालिकाले हालसम्म चार वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेर सेवा सुरु गरेको छ ।
गाउँपालिकाले वडा नं. १ को पुलाह सैन, वडा नं. ६ को उखाडी, ७ को दैनिकर र ९ को पीपलचौतारामा जनसेवा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेर सेवा सुचारु गरेको छ ।
गाउँपालिकाले स्थापना गरेका जनसेवा केन्द्रसहित अब पलाँता गाउँपालिकामा नौवटा स्वास्थ्य केन्द्र भएका छन् । अब सबै वडाका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन् ।
पलाँताको खानेपानी समस्याको समाधाका लागि बस्तीस्तरमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको सहयोगमा गाउँपालिकाले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । गैरसरकारी संस्था किडार्क नेपाल, युनिसेफलगायतको खानेपानी निर्माणमा सहयोग छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले पलाँताको चरम खानेपानी अभावलाई सदाका लागि अन्त्य गरिने बताए ।
गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ को राडु नेटामा रेडियो नयाँ कर्णालीले आयोजना गरेको जनतासँग अध्यक्ष विकासका लागि रेडियो बहसमा सहभागी नागरिकहरूले खाली भाडा ल्याएर देखाएपछि खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पहल भएको हो ।
नो सिन्डिकेट !